Home News Toogasho ka dhacday Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa saakay waxa ay degmada Waaberi ee Gobolkan Banaadir ku dileen askari ka tirsanaa Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dad goobjoogayaal ahaa ayaa waxa ay u sheegeen Muqdisho Online in dilka uu ka dhacay Isgoyska Suuqa Beerta,isla markaana rag hubeysan oo watay gaari nooca raaxada ah ay toogteen askariga oo ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya kadibna ay baxsadeen.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay kuwaas oo qaaday meydka askariga.
Dilalka loo geysanayo askarta Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa joogto ah magalada Muqdisho,waxaana dilalkaas sheegta Al-Shabaab iyo kooxda Daacish.
Previous articleWararkii Ugu Dambeeyay Ee Kismaayo iyo Gudigii Aqalka oo !!
Next articleSoomaaliland oo Mar kale Hanjabaad u dirtay Puntland
Axmed Dowlo dadkii dilay oo Maxkamad lasoo taagay!!
War Deg deg ah: Galmudug oo xiriirka u jartay dawladda Federalka...